Muungaab: Shacabku yaaney gabaad siinin Shabaabka caasimadda soo gelaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab: Shacabku yaaney gabaad siinin Shabaabka caasimadda soo gelaya
13th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka codsaday dadweynaha Muqdisho in aysan gabbaad siin firxadka xubnaha Al-Shabaab ee ka imaanaya gobollada dalka, islamarkana uu sheegay iney soo gelayaan Muqdisho.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa xusay inay ka war qabaan in firxad ka tirsan Alshabaab oo ka imaanaya gobollada uu ku soo wajahan yahay Muqdisho, si ay ugu badbaadaan.
Guddoomiyaha ayaa ku boorriyey in ay ciidamada gacan ku siiyaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen firxadka shabaabka la baacsanayo, wuxuuna ku hanjabay iney dhankooda tilaabo adag ka qaadayaan Alshabaabka soo gelaya magaalada.
“Tallaabo cad ayaan ka qaadi doonaa Al-Shabaabka ku soo qulqulaya Muqdisho ee ka soo cararaya gobolada dalka” ayuu yiri Guddoomiyaha maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in xasiloonida Muqdisho ay ka soo reyneyso marka loo eego sidii ay ahayd muddo sanado ah.
Gudoomiye Mauungaab ayaa dhallinyarada Alshabaab ugu baaqay in ay ka faa’iidaystaan cafiska madaxweynaha oo ay isu soo dhiibaan ciidamada Soomaaliya.
Booliska Somaliland oo rasaas ku kala ceryiyey arday debadbax ku dhigayey Hargeysa
Madaxweynaha oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka Imaaraatka Carabta